अब नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण हुन्छ – Janaubhar
अब नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण हुन्छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस १५, २०७२ | 204 Views ||
– कुबेर ओली
(अध्यक्ष), एकीकृत नेकपा (माओवादी) दाङ
माओवादी पार्टी फुटेको फुट्यै छ । ठूलो पार्टी अहिले सानो भएको छ । के माओवादी आन्दोलन विर्सजनको दिशामा जान थालेको हो ?
अहिले पार्टी टुटफुट र विभाजन भएको छ । टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भएर पार्टीहरु खण्डित भएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि पार्टीबाट राजिनामा दिएर नयाँ शक्ति निर्माण भन्दै लाग्नुभएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीबाट उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ । पार्टीबाट पलायन हुँदै जाने, क्रान्तिबाट भाग्ने प्रवृत्ति पनि छ । केही मान्छेहरुले समय–समयमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै धोका दिएर जाने गर्छन् । यो नियमित प्रक्रिया हो । विगतमा पनि यस्ता घटनाहरु नभएका होइनन् । ठूलो मान्छे गयो वा सानो मान्छे गयो भन्ने कुरा हो । कसैले अलि बढी हल्ला गरेर जान्छन् । समाजमा ठूलै काम गरेको जस्तो चर्चा गर्छन् । त्यसको खासै अर्थ रहदैन ।
अब पार्टी शुद्धिकरण भएर नयाँ ढंगले अघि बढ्छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरेर पार्टी अघि बढ्छ । पार्टी तत्काललाई कमजोर देखिए पनि गलत व्यक्तिको बहिर्गमनले पार्टी नयाँ बन्छ । यसले समग्र पार्टी रुपान्तरण र क्रान्तिका लागि फाइदा पुग्छ । हामीले यस्ता सामान्य विषयलाई पन्छाउँदै निरन्तर क्रान्तिको बाटोमा लाग्नुपर्छ । पार्टीभित्र रहेका क्रान्तिकारी चेत भएका व्यक्तिहरु मिलेर नै पार्टी बन्ने हो ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीमा केही क्षति भएको अवश्य सही हो । हामीले अब नयाँ ढंगले सोच्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निराश भएर होइन, नयाँ उत्साहका साथा अघि बढ्नु नै उपर्युक्त हुन्छ । अब क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण हुन्छ ।
भएका कार्यकर्ताहरु छोडेर गएको गयै गर्ने, तपाईहरुले कुनै नयाँ कार्यक्रम पनि लिन नसक्ने । अब कसरी बन्छ त नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी ?
हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौं । दीर्घकालीन रुपमा के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्दैछ । पार्टीले तय गरेका कार्यक्रमबाट अघि बढ्छ । अहिले पनि हाम्रो पार्टी कही हराएको छैन । पार्टीभित्र क्रान्तिकारी चेत र ऊर्जा कायमै छ । अहिले परिचालन मात्र हुन नसकेको हो । सही ढंगले परिचालन गर्ने हो भने पार्टी अवश्य पनि चुस्त बन्नेछ । केन्द्रीय प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका कामले गर्दा नेताहरु त्यता व्यस्त हुनुभयो । अब पार्टी सही ढंगले परिचालित भयो भने पुनः पार्टी शक्तिशाली बन्नेछ ।
अहिले आन्दोलन अलि पछि परेको देखिन्छ । शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्मको मुल अभिभारा हाम्रो पार्टीले लिएको छ । यही कारणले गर्दा पार्टी निर्माणमा उचित समय नपुगेको हो । अब हामी आफ्नो अभियानलाई घनीभूत ढंगले अघि बढाउने छौं । पार्टी केन्द्रले पनि यस विषयमा उचित पहल थालिसकेको छ ।
माओवादी आन्दोलनमा तपाई एक इमान्दार र पाका नेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । तपाई पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा आइसकेपछि मान्छेहरुले एमाओवादी अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छ कि भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर, पार्टी त अस्तव्यस्तै बनाउनुभयो है ?
कुनै पनि वस्तुमा विपरितहरुको एकत्व हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा होला । पार्टी पनि विपरितहरुको एकत्व हुन्छ । त्यहाँ फरक–फरक विचार हुन्छ । ती विचारहरुको एकता गरेर जाने कुरा महत्वपूर्ण हो । तपाईको कुरामा केही सत्य हो । यो समस्या मेरो कारणले मात्र आएको हो भन्नु गलत हो । अहिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन जुन रुपमा विखण्डन र बिर्सन हुँदैछ । त्यसको प्रभाव दाङमा परेको छ । राष्ट्रिय आन्दोलनलाई जुन ढंगले प्रभाव पारेको छ, जिल्लामा पनि त्यसको असर परेको हो । जिल्लामा मैले मात्र फरक गर्न नसकेको हो ।
तपाईले भने जस्तै मैले पनि पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने सोचेको थिएँ । मैले शुरुमै भनेको थिएँ– पार्टीलाई ठीक ट्रयाकमा ल्याएर नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै सोच हो । इमान्दार र पुरानालाई प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरुलाई सही ढंगले जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । बीचमा ८÷१० महिना बिरामी भएकाले काममा अवरोध आयो । त्यसपछि राष्ट्रिय परिस्थितिले प्रभाव परेकाले सोचअनुसार काम गर्न नसकेको सही कुरा हो । फेरि पनि पार्टी आफ्नो विचारमा अडिग छ । एउटा धारमा हिडिरहेको छ । जिल्ला पार्टीले पनि आवश्यक काम गरिरहेको छ । अब ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्छ ।
तपाईले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि एमाओवादी संसदीय भासमा गइसक्यो । अझैं पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ है तपाईहरुमा ?
चाहेर गएको वा नचाहेर गएको भन्ने मूल विषय होइन । बाहिरबाट हेर्दा तपाईहरुले संसदीय भासमा गएको जस्तो देखिन्छ । आवरण र अन्तर्य फरक हुन्छ । हामीले भित्री गुदी कुरा हेर्न जरुरी छ । बाहिर संविधान बन्यो, सरकारमा गयो, चुनावमा गयो । यसले गर्दा पार्टी संसदीय भासमा गयो भन्ने सतही कुरा ठीक होला । तर, पुरानो संसदीय शैलीलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौं । अहिलेको संविधानले समेत यसलाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छैन । हामीले नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभार पूरा हुने गरी यो संविधान निर्माण गरेका छौं । हामीले संविधानमार्फत् जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको संस्थागत गरेका छौं । संविधानसभा मार्फत् संविधान बनाएका छौं । कमसेकम परिमार्जित लोकतन्त्रको विकास गरेका छौं । हामीले नेपालमा नयाँ प्रयोग गरेका छौं । हामीले प्राप्त उपलब्धिहरुलाइै टेकेर नै अघि बढ्छौं । अहिलेको आवश्यकता यही नै हो ।
अहिले पनि तपाईको पार्टीमा रहेका इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई दैनिक गुजारा चलाउन नै गाह्रो परहेको छ । तर, केही टाठाबाठा, नेताका आफन्तहरु अवसर पाइरहेका छन् । माओवादीभित्र इमान्दार कार्यकर्ताहरुले पनि अबसर पाउने दिन कहिले आउँछ ?
पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्तालाई अहिले पनि दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भएको यथार्थ हो । केही छट्टुहरु नेताको चाकडी गरेर अवसर पनि लिएका छन् । यसलाई आम जनता र कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई पनि अबसर दिनका लागि पार्टीले आचारसंहिता बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीले त्यो गर्न सकेन भने ठीक ढंगले अघि बढ्न सकिदैन । पार्टीको तल्लो तहसम्म पुगेर हामीले नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । इमान्दारहरुको हौसला बढाएर मात्र पार्टी नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।
अहिले तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसलगायत केही मधेशवादी दलहरु सरकार बाहिर छन् । के नेपाली राजनीतिमा धुव्रीकरण शुरु भइसकेको हो ?
नेपाली राजनीति धुव्रीकृत भएको भन्न मिल्दैन । अहिले देशमा राष्ट्रिय समस्या आएको छ । यस विषयमा सबै दलहरुमा एकरुपता आउन जरुरी छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामीले राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ । हामीले देशलाई परनिर्भरताबाट बचाउनुपर्छ । देशको स्वाभिमानलाई बचाउनुपर्छ । देशभक्तिपूर्ण भाव सबैमा जाग्न जरुरी छ । राजनीतिक रुपमा विचारको कुरा फरक–फरक छ, त्यसलाई नै धुव्रीकृत भएको भन्न मिल्दैन । फरक–फरक विचार भएकाहरु सरकारमा सहभागी छन् । राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी सबै एक हुनुपर्छ । देश रहे मात्र हामी रहन सक्छौं ।
भारतीय नाकाबन्दीपछिको राष्ट्रिय संकट अन्त्य गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
मुख्य कुरा भारत एउटा विशाल देश हो । हाम्रो देश तिनै तिरबाट भारतसँग जोडिएको छ । नेपाल भू–परिवष्ठित राष्ट्र पनि हो । हरेक चीज तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा हामीलाई भारत भएर नै ल्याउनुपर्छ । कुट नीतिक सम्बन्धबाट समस्याको हल गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, भारतले दादागिरी गरेर नेपाललाई कमजोर पार्न खोज्छ भने जो कोही नेपाली जनता त्यसरी बस्न सक्दैन । आफ्नो जीवन अर्पण गर्न तयार छ । निडर भएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार अब कुनै पनि हालतमा पनि झुक्नु हुँदैन । देशलाई अझ घाटा पुग्ने गरी सम्झौता गर्नु हुँदैन । बरु नेपाली जनता भोकै बस्न तयार छन् ।
Prevविद्यालय सुधार कार्यक्रममा ९ करोड बृद्धि
Nextगिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट !